Faka okunye ukusebenza okwengeziwe kuFirefox kusuka ku- about: config | Kusuka kuLinux
Faka okunye ukusebenza okwengeziwe kuFirefox kusuka ku- about: config
Ukufunda i-RSS yami ngithola i-athikili ethokozisayo ku- UGenbeta lapho abasikhombisa khona amaqhinga noma ukusebenza okungu-10 esingasebenza kukho Firefox kusukela mayelana: i-config. Kulokhu ngibeka lezo engizithole zithakazelisa kakhulu:
Khombisa izithonjana nge-Ctrl + Tab:
Kube yinto efana kakhulu nalokho esinakho kudeskithophu yethu lapho sisebenzisa okhiye Ithebhu ye-Alt +. Ukuyisebenzisa sishintsha inani browser.ctrlTab.previews a true.
Khombisa / fihla izinkinobho ukuvala amathebhu:
Ngivale amathebhu wami ngokucindezela umqulu wegundane, ngakho-ke angidingi ukuba nezinkinobho eziseduze kumathebhu, noma okungenani hhayi kuwo wonke. Ukufinyelela ipharamitha browser.tabs.closeButtons nokushintsha amanani singaba namanani alandelayo:
0 (ikhombisa inkinobho yokuvala kuphela kuthebhu esebenzayo).
1 (ngokuzenzakalela, ikhombisa inkinobho yokuvala konke).
2 (ayikhombisi inkinobho kunoma iyiphi ithebhu).
4 (ikhombisa inkinobho eyodwa ezansi kwamathebhu).
Gwema ukubuyela emuva ngokhiye we-backspace:
Besivele silibona leli qhinga lingena KusukaLinux, kodwa enza okuphambene nalokho. Uma sifuna ukubeka yonke into ngokuzenzakalela singayenza ingasebenzi ngokushintsha ipharamitha browser.backspace_action a 2.
Khombisa "http: //" kuzo zonke izinkomba:
Yebo, uma ufuna ukubona i-http: // futhi kubha yekheli, kufanele ubeke ipharamitha browser.urlbar.trimURLs en false.
Khubaza ukuphela kwesikhathi ngaphambi kokufaka i-plugin:
Njalo lapho sifuna ukufaka i-add-on entsha, isibonisa ngokuzenzakalela ukubala phansi ngaphambi kokuthi sichofoze inkinobho "Faka". Singakuguqula lokhu ngokubeka ipharamitha security.dialog_enable_delay e 0.
Nika amandla i- "Gcina bese uvale" lapho uvala i-Firefox:
Empeleni lapho sivala iFirefox ngamathebhu avulekile, singakwazi ukuwavula kabusha uma sifaka ibha ye-URL about:home bese uchofoza inkinobho: Buyisela iseshini yangaphambilini, noma into enjalo. Kodwa-ke, uma ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi iFirefox iyakugcina lokho esivule ngakho, siguqula ipharamitha browser.showQuitWarning a true.
Khombisa imiphumela yosesho kuthebhu entsha:
Kulokhu siguqula ipharamitha browser.search.openintab a true.
Ungabona amanye amaqhinga ku-athikili yokuqala ye- UGenbeta.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Faka okunye ukusebenza okwengeziwe kuFirefox kusuka ku- about: config
Kuhle, ngiyabonga ngobuqili buka-Elav.
Engangimthanda kakhulu kwakungowokuqala, wangisiza kakhulu.
Nompilo mthembu (@nompilo_mthembu) kusho
I-athikili enhle, ngiyayithanda iFirefox futhi lawa macebiso mahle! 🙂
Phendula ku-Yohan Graterol (@yograterol)
Bengingazi ngokubukwa kuqala. Iyasebenza, hehehe.
Amathiphu mahle kakhulu. Manje, ukwenza kusebenze ukubuka kuqala nge-Ctrl + Tab ku-Iceweasel yami.
Kuhle kakhulu, izinto eziningi eziwusizo.
Kuhle kakhulu. Thethelela umbuzo wami kodwa .. Ngingasikhubaza kanjani leso sikhangiso esibusisiwe seGoogle "Faka iGoogle Chrome" kuFirefox. Mayelana
Ngokuvikela okungeziwe, khubaza ama-Referer.
Lesi sihloko esidume kabi esingabhalwa kahle esithunyelwa ngokuzenzakalela ngaso sonke isicelo se-HTTP sinikeza imininingwane eminingi engahle ibe khona kumawebhusayithi. Kepha ungayikhubaza. Vula ithebhu entsha bese kubha yekheli lakho faka u- "about: config". Uzobona isexwayiso sokuthi uqaphele okwenzayo. Chofoza ku- "Ngizoqaphela, ngiyathembisa!" Kubha yokusesha, thayipha u- "referer." Kufanele ubone [inkambu] "network.http.sendRefererHeader". Qhafaza kabili kuso bese ushintshe inani libe ngu-0:
Amaqhinga amakhulu, ngiyabonga
Hawu, amathiphu amahle kakhulu. Ngiyabonga
I-BYTEMARK yenza umnikelo obalulekile kuphrojekthi ye-Debian
Amathuluzi wamahhala wokulwa ne-malware ne-anti-rootkit